Sidee ayuu ku xulanayaa Kabtanka kooxda Guardiola inta uu dhaawaca ku maqan yahay Kompany? – Gool FM
Real Madrid oo Taako loo dhigay, Liverpool iyo Man City oo guulo gaaray & guud ahaan natoojooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… + SAWIRRO
RASMI: Josep Maria Bartomeu oo iska casilay xilka madaxtinimada ee Barcelona
Miralem Pjanić oo doortay midka ugu fiican Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo
Pirlo oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan Ronaldo kulanka Barcelona, muxuuse ka yiri Messi??
Ciyaaryahan reer France ah oo sheegay in Kylian Mbappé uu ku biiri doono Real Madrid
“Messi waa kan ugu fiican adduunka waana inaan caawinaa isaga” Xiddig kooxda Barcelona ah
Pique, Coutinho & Ter Stegen oo maqan sidee ayay u muuqan doontaa shaxda ay ku soo geli doonto Kooxda Barcelona kulanka ay booqanayaan Juventus ee Champions League?
Sidee ayuu ku xulanayaa Kabtanka kooxda Guardiola inta uu dhaawaca ku maqan yahay Kompany?
Kaafi July 27, 2016
(Manchester) 26 Luulyo 2016. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola waxa uu sheegay in Ciyaaryahanada ay xulan doonaan Kabtankooda inta uu maqan yahay Vincent Kompany.
Daafaca Belgium-ka u dhashay waxa uu xilli ciyaraeedkii hore dhaawacmay shan jeer waxaana la filayaa in uu maqnaado ugu yaraan ilaa iyo bisha September kaddib markii uu qallin dhinaca gumaarka ah maray bishii Maajo.
Iyada oo hada Kabtanka kooxda ku magacaaban yahay Kompany hadana Guardiola waxa uu goostay in uu u daayo Ciyaaryahanada in ay doortaan midka ay rabaan waxaana ugu cad cad Joe Hart iyo Yaya Toure.
“Ciyaaryahanada waa in ay doortaan Kabtanka,” sidaas ayuu ku sheegay shirkiisii jaraa’id. “Waa in ay go’aansadaan. Hadii Vincent Kompany uusan dheeleen sababto waa in uu dhaawacan yahay, ma aha dhib weyn.
“Waxaan leenahay khibrad badan, Joe, Yaha. Aniga ma aha qolka dambe, kuma jiro shirarka. Waa in ay iyaga isu doortaan, iyaga ayaa si fiican isaga key yaqaan. Taas waa waajibaadkooda.”
SAWIRRO XUL AH: Barcelona oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Andre Gomes
Simone Zaza oo Torino ka tegaya & kooxaha AC Milan & AS Roma oo iskula dheggan